AQOONSIGA CAANKA AH: SIFOOYINKA BEERAHA, DARYEELKA IYO DHALIDA, SAWIR - SOOSAARKA DALAGGA
Euonymus waa mid ka mid ah dhirta ugu murugsan. Aqoonsiga dalkan (Homeland euonymus) waa dalal ku yaal cimilada iyo cimilada.
Sidaa darteed, geedka waxaa inta badan laga helaa dhulka Japan, Madagascar, qaar ka mid ah dalalka America iyo Yurub.
Aqoonsiga dabiiciga ah wuxuu gaari karaa dherer ahaan 7 mitirSi kastaba ha ahaatee, for dhirta taranta ee xaaladaha qolka ay isticmaalaan noocyada koobi ee spruce Japanese.
Dhirta noocan oo kale ah oo cufan oo dhoobo ah ayaa dhif ah in dhif ka badan 1 mitir.
Hoyga, ee ku jirta eu magaciisu waa dherer ka badan 30 cm. Caleemaha waa qaab muuqaal leh dherer ahaan 4 cm, dhinacyada caleenta way yar yahiin kuwo hooseeya, geeska ayaa la tilmaamay.
Qaybta sare ee xaashidu waa cagaar dhalaalaya, laakiin qaybta hoose waxay ka mid tahay hooska madow. Ubax waa kuwo yaryar, hooska cas ee casaanka ah. Marmarka qaarkood, ubax ayaa lagu ururin karaa inflorescences yar oo ah 2 cm oo dherer ah, oo leh 2-3 ubax kasta.
Waa muhiim! Waa inaad ogaataa taas miraha Aqoonyahanadu waa sunta dadka! Xilliga xagaaga, miraha (qaabka sanduuqa) waxay leeyihiin midab cagaaran oo cagaar ah, laakiin dayrta waxay bilaabaan inay noqdaan casaan ilaa ay ka soo noqdaan hoosta burgundy.
Aad u qurux badan, laakiin sun ah. Haddii ay jiraan carruur yaryar oo guriga ka mid ah, waxaa haboon in la soo saaro miraha ka yimaada duurka.
Tixgeli nuucyada ugu muhiimsan ee magaca:
Kijarka gaarka ah;
qurux badan oo reer galbeed ah;
Dagaal aan qabyo ahayn;
Waxaad qiimeyn kartaa muuqaalka muuqaalka eu magaciisa la isticmaalayo iyadoo la adeegsanayo sawir sawir:
Inkasta oo tirada noocyada badan ee eu magaciisa la yiraahdo, waxay ahayd eu magac u ah jasiiradda Japanese-ka ee caan ka noqday beerta. Xaqiiqdu waxay tahay in geedka waxay ka dhigeysaa dalab aad u yar oo ku saabsan iftiinka iyo qoyaanka.
Hawada qolka waxay noqon kartaa mid qallalan, oo dheri leh dhirtu waxay ku taagnaan kartaa hooska qayb ahaan. Si kastaba ha noqotee, xilliga kuleylka, eu magaciisa waa in laga soo bixiyaa mararka qaarkood hawo cusub oo la duubo.
Waa in la xasuusto eu magaciisa ma jecla qorax cad. Haddii iftiinka qoraxda tooska ah uu ku dhaco caleemaha dhirta, waxay ugu dambeyntii bilaabaan inay huruud noqdaan ama ay ku daboolaan dhibco madow.
Wixii beeraha ee eu magaciisa ah heerkulka ugu fiican + 18-20 digrii. Laakiin hoos u dhigista ama kor u qaadista heerkulka warshadu waxay u dulqaadataa si fudud.
Xilliga diiranmarka heerkulka hawadu uu aad u sarreeyo, eu magaciisa waa in marar badan la waraabiyaa oo lagu buufiyaa biyo nadiif ah.
Waa inaad ogaataa! Haddii xilliga qaboobaha geedku wuxuu ku dhow yahay ilaha kulaylka, ka dibna suurtagalnimada caleenta caleenta waa mid aad u sareysa. Si looga hortago tani waxay dhacaysaa, eu magaciisa waa la buufin ama la dhaqaa caleemo.
Haddii warshadda lagu beeray dhulka, ka dibna waxaa la ilaaliyaa jiilaalka, daboolaya wax kasta oo laamaha geedaha ah.
Xilliga xagaaga, codka waa inuu ahaadaa biyo badani. Laakiin ha buuxin!
Aad bay muhiim u tahay in la abaabulo biyo dheellitiran marxaladda beeritaanka geed ku jira dheriga si aysan biyuhu u joogsanin xididdadiisa.
Hoos u dhig heerkulka hawada, biyo yar ayaa loo baahan yahay.
Xilliga jiilaalka, waraabinta waa inay noqotaa dhexdhexaad. Laakiin ciidda agagaarka geedka waa in mar walba qoyan yahay!
Wixii waraabka ah, isticmaal biyo keliya. Gabbashada biyaha waa inay ahaato ugu yaraan hal maalin.
Inkastoo xaqiiqda ah in dhirta aysan aheyn mid qashin ah oo ku saabsan qoyaan, eu waa in si joogto ah loo buufiyaa. Xaqiiqdii ma noqon doonto ka sii xumaan, iyo cayayaanka ayaa si aad ah u saameeya daaweynta this baadiyaha.
Mabda 'ahaan, quudinta dheeriga ah ee loo yaqaan' euonymus ' aan loo baahnayn. Si kastaba ha noqotee, ma noqon doonto mid aad u macquul ah si ay u quudiyaan dhirta leh Bacriminta adag ee Bacriminta ee xilliyada guga iyo xagaaga. In ka badan hal mar bishii looma baahna.
Waa noocee bacriminta loo isticmaalo waxay ku xiran tahay hawsha dhirta. Waxaa la ogyahay in eu magaciisa caanka ah ee Japan laba hirarka koritaanka. Xaqiiqda ah in muddada koritaanka uu dhammaaday, ayaa sheegay in muuqaalka kore ee burooyinkeeda (koonaha) ee sare ee biqil kasta.
Taa beddelkeeda, marka burooyinkani ay bilaabaan inay furaan oo foomka caleemaha cusub, mawjada kale ee koritaanka geedaha ayaa la filayaa.
Sidaa darteed, xilliga ay hawshu bilaabanayso, waa inaad ku quudisaa dhirta iyaga oo leh Bacriminta nitrogen. Dhexdhexaadka waqtiga, waxaad isticmaali kartaa Bacriminta adag, iyo xilligaas, marka kelyaha la sameeyay - phosphate potassium.
Xaaladaha badankood, Euonymus waxay u jilcisaa qudaar ahaan.
KUSAABSAN! Buunshaha waa la faafin karaa iyada oo loo qaybinayo baadiyaha, suckers xididka, abuurka iyo gooyn cagaaran.
Habka ugu fudud ee dhalmada waa dhalmo by gooyn cagaar.
Tani, in June-July, gooyn gabar xoog leh ayaa laga doortaa dhererka 5 ilaa 6 cm, waxaana lagu beeray filimka substrate ee bacrin ah.
Markaas aqalka dhirta lagu koro ayaa lagu rusheeyaa lakabka ciidda 5 cm, iyo gooynaya xididdo ayaa la filayaa.
Sida caadiga ah Rooting waxay dhacdaa maalinta soddonaad.
Abuurka cawska ayaa caleenta dhif ah. Tani waxay sabab u tahay murugo go'an iyo muddada nidaamka. Haddii miraha aan looxaqiijin ka hor beerto, waxay gaajoon doonaan wax ka hor sannad ka dib. Ka dib markii diyaarinta abuur, biqilka wuxuu u dhacaa si dhakhso badan.
Abuuri abuurka diyaarsan ee dhulka, kaas oo ka kooban:
dhul caleen - 4 qaybood;
humus - 2 qaybood;
dhulbeereed - 1 qaybood;
ciid - 1 qayb.
Caleemaha ugu horreeya waxay u muuqdaan maalinta 15-aad. Guga ama xilliyada dayrta waxay ku dhacaan mulch. Xilliga xagaaga waxay bacrimiyaan isticmaalka doodwadeenka. Xilliga qaboobaha, sariirta waxaa lagu daboolaa caleemo dhogor ah si looga hortago khalkhalka. Qaadida dhirta koreysa ee goobta weyn ayaa la soo saaraa sannadka saddexaad.
DIB U EEGIDDA! Haddii aad jeclaan laheyd eu magaciisa, markaa waxaad hubaal ka dhigan doontaa inuusan jirin wax yar oo qurux badan oo qurxoon, sida: Broom, Skimmy iyo Leptospermum.
Wixii cufan qulqulo qulqulo cakin.
Qaado miraha iyo ciidda cabirka 1: 2 oo qaso si fiican.
Seeds ee ciidda waxaa lagu hayaa heerkul ah + 10 digrii saddex bilood.
Markaas, marka qolofka qarxay abuurka, waxay ku kaydsan yihiin 4-5 bilood, laakiin heerkulku waa inuu ka hooseeyo - ilaa 2-3 digrii.
Si looga hortago abuurka laga bilaabo dhimista, waa inay ahaadaan geeddi-socodka of kaneecada.
Qoryaha yar yar 5 sano ka hor sanad walba la dhuuqo dherer weyn. Ka dib 5 sano, dhirta ayaa lagu beddeli karaa yaraa - illaa 1 mar saddexdii sano.
Waa muhiim! Weligaa iskuma geyn unugyada beeraha ee gabowga. Tan iyo markii la gooyey geedka waxaa si weyn u daciifay, oo aan laga yaabaa in aan ku tallaalin.
Manjooyin ka hortagga gaboobey waxaa loo sameeyaa sida caleemaha oo qalalan sanadka oo dhan. Laakiin waxaa ugu wanaagsan in la jiido ama jiido caleemaha. guga. Si taaj loo noqdo mid adag oo qurux badan.
Geedka gaaban iyo saxda ah wuxuu suurtageliyaa suurtagalnimada inuu abuuro baadiyaha ama dhirta heerkulka caadiga ah. Indeed, ka dib markii manjooyin, burooyinkoodii hurdada ayaa bilaabaan inay si firfircoon u horumariyaan, kaas oo caleemaha yar yar ay horumaraan.
Lafaatiirta iyo cirifka gaduudka Euonymus oo lagu tilmaamayo dabacsanaan iyo dheelitirnaantaiyo khibrad iyo dulqaad waxaa loo samayn karaa qaab bonsai ah.
Haddii caleemaha geedku ay bilaabaan inay jilciyaan, xudduudaha waa la wareegay, iyo talooyinka qadhaadhka ah, ka dibna waxay ka dhigan tahay in geedka iftiin qorrax leh. Shoogana waa loo baahan yahay.
Haddii euormoonku bilaabo inuu caleemo saaro, markaa tani waxay muujinaysaa Qoyaan hooseeya qolka ama heerkulka sare.
Waa inaad u guurto geed ku rid qolka qaboojiyaha oo ku buufin caleemaha biyo nadiif ah.
Haddii koritaanka baadiyaha uu istaago, iyo caleemaha hoose waxay si dhakhso ah u noqdaan jaalle ka dibna dhacaan, markaa, waxay u badan tahay, adiga oo keliya warshad ku shubtay. Waqti aad u halis ah! Haddii ay timaado calaamadaha xididada, eu magaciisa ayaa u muuqda in uu dhinto.
Cayayaanka ugu weyn ee saameeya eu magaciisa caanka ah waa caarada cas ee caarada, caarada caarada iyo caarada.
Haddii daboollada buniga ah ay ka muuqdaan dusha sare ee caleemaha iyo caleemaha, tani waa waxay ka hadlaan muuqaalka muuqaalka cayayaanka gaashaanka. Mustaqbalka, caleemuhu waxay isu beddelaan jaalle, luminta midabkooda waxayna ugu dambeyntii dhacaan. Habka loola tacaalo qiyaasta cayayaankan: warshad ku buufin 3 jeer toddobaadkii oo ah shan iyo toban boqolkiiba halis ah.
Gawaarida ayaa ka muuqata muraayadaha internodeska ah, caleemuhuna way engegaan oo ugu dambeyntii dhacaan - geedka ayaa ku dhuftay caarada caarada. Haddii cayayaanku aanu ahayn wax badan, markaa waxay noqon doontaa mid ku filan ku dhaq saabuun hoos diirran ama tirtiro caleemaha leh isbuunyo biyo lagu rusheeyey.
MUHIIM! Haddii jabinta baadiyaha ay xoog badan tahay, markaa waa in loola dhaqmaa atell ah, sida marka la dagaalanka gaashaan.
Haddii dhibco iftiin leh ay ka muuqdaan caleemaha, caleemuhuba waxay u muuqdaan kuwo waxyeello leh, macnaheedu waa dhirta ku dhuftey sax ah guduud. Gaar ahaan cayayaanku wuxuu jecel yahay caleemaha yar yar. Si loola dagaallamo shilinta waa inay ahaato sida soo socota: caleemaha waxyeeloobay waa in laga saaraa, iyo dhirta laftiisa ayaa lagu buufin karaa wixii cayayaanka ah.
Euonymus waxay u muuqataa mid aad u qurux badan! In kasta oo beerta, xitaa on windowsill ee dheri ah. Dabcan, geedkan wuxuu u baahan yahay daryeel gaar ah oo abuuraya jawi deggan. Laakiin dhinaca kale, wuxuu qurxin doonaa qol kasta iyada oo aan wax dhibaato ah la keenin gabal Japan ah.